အောက်လမ်းနဲ့လုပ်တာခံရပြီး ဆေးခန်းနဲ့မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့ ကြာစိရဲ့ဇနီး
ပရိသတ်တွေကို ရယ်မောပျော်ရွှင်စေတဲ့ ဟာသ သရုပ်ဆောင် ကြာစိကတော့ အရမ်းကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဇနီးချောလေးနဲ့အတူ အနုပညာအလုပ်တွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်ရင်း အေးချမ်းတဲ့ဘဝလေးကို ဖြတ်သန်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြာစိရဲ့ချစ်ဇနီးချောလေးကတော့ ကိုယ်ဝန် ၈လရှိနေပြီဖြစ်ပြီး အခုလတ်တလောမှာတော့
ကျန်းမာရေးအခြေအနေ တော်တော်လေး ချို့တဲ့နေတာပါ။ နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာတွေနဲ့ပြကြည့်ခါမှ အောက်လမ်းနဲ့လုပ်ထားတဲ့အကြောင်းကိုသိခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး ကြာစိတစ်ယောက်ကတော့ တော်တော်လေး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတာပါ။ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ကြာစိတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးရဲ့ ထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးအကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ကြာစိကတော့ ” သီးခံနေခဲ့တာ များပြီ ဘယ်သူကိုမှမပြောဘူးလို့..နေခဲ့တာ..မိန်းမကိုဝန် ၈လထဲရောက်လာပြီ..ကျန်းမာရေး ချုချာလွန်းတော့ မွေးဖို့အတွက် သူအားငယ်နေရှာတယ်..ခုထိလဲ မစားနိုင် မအိပ်နိုင်..စားပြီးလဲ အန်လိုက်. ညဆို.မှေးခနဲ အိပ်ပျော်တာနဲ့ လန့်လန့်နေတယ်..အိပ်ပျက်ညတွေ များပြီးသွေးပေါင်ကျ ဆေးခန်းနဲ့မပြတ်…ဆေးထို့ရလွန်းလို့လဲ ညိုမဲစွဲနေပြီ .. ဒါနဲ့..တစ်ချို့နားလည်သိတဲ့လူတွေကပြောလို့..လိပ်ပြာချုပ်လေး လုပ်ပေးပါဆို့လို့ ဆရာပြမှ..အောက်လမ်းလုပ်ထားတယ်တဲ့လေ…. ဪ…လူတွေ…လူတွေ…ကိုယ့်ပြုသည့်ကံ… ပဲ့တင်သံ…ကိုယ့်ထံပြန်လာမည်…. ဒါကို မသိလေရော့….မေတ္တာသုတ်လေးသာရွတ်ပြီး မေတ္တာမပြတ် ပို့ပေးလျှက်ပါဗျာ…” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကြာစိကတော့ အရမ်းကိုချစ်ခင်ရတဲ့ ဇနီးချောလေး အခုလိုနေမကောင်းဖြစ်နေတာကြောင့် တော်တော်လေးစိတ်ညစ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ (၁၄) ရက်နေ့က မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့တဲ့ ကြာစိတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အသက်ကွာကြပေမယ့် နားလည်မှု နဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို တည်ဆောက်ထားကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေလည်း ကြာစိတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦး မကောင်းတဲ့အနှောင့်အယှက်ရန်တွေမှကင်းဝေးပြီး မကြာခင်မှာလူ့လောကထဲရောက်ရှိလာတော့မယ့် သမီးလေးနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်အေးချမ်းတဲ့ဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ကြပါဦးနော်။
Source;Kyar Si’s Facebook
အောကျလမျးနဲ့လုပျတာခံရပွီး ဆေးခနျးနဲ့မပွတျဖွဈနတေဲ့ ကွာစိရဲ့ဇနီး
ပရိသတျတှကေို ရယျမောပြျောရှငျစတေဲ့ ဟာသ သရုပျဆောငျ ကွာစိကတော့ အရမျးကိုခဈြစရာကောငျးတဲ့ ဇနီးခြောလေးနဲ့အတူ အနုပညာအလုပျတှဆေကျတိုကျပွုလုပျရငျး အေးခမျြးတဲ့ဘဝလေးကို ဖွတျသနျးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကွာစိရဲ့ခဈြဇနီးခြောလေးကတော့ ကိုယျဝနျ ၈လရှိနပွေီဖွဈပွီး အခုလတျတလောမှာတော့
ကနျြးမာရေးအခွအေနေ တျောတျောလေး ခြို့တဲ့နတောပါ။ နားလညျတတျကြှမျးတဲ့ ဆရာတှနေဲ့ပွကွညျ့ခါမှ အောကျလမျးနဲ့လုပျထားတဲ့အကွောငျးကိုသိခဲ့ရတာဖွဈပွီး ကွာစိတဈယောကျကတော့ တျောတျောလေး စိတျမကောငျးဖွဈနရေတာပါ။ ခဈြပရိသတျတှအေတှကျ ကွာစိတို့ဇနီးမောငျနှံနှဈဦးရဲ့ ထူးခွားတဲ့အဖွဈအပကျြလေးအကွောငျးကို ဖျောပွပေးလျိုကျပါတယျနျော။
ကွာစိကတော့ ” သီးခံနခေဲ့တာ မြားပွီ ဘယျသူကိုမှမပွောဘူးလို့..နခေဲ့တာ..မိနျးမကိုဝနျ ၈လထဲရောကျလာပွီ..ကနျြးမာရေး ခြုခြာလှနျးတော့ မှေးဖို့အတှကျ သူအားငယျနရှောတယျ..ခုထိလဲ မစားနိုငျ မအိပျနိုငျ..စားပွီးလဲ အနျလိုကျ. ညဆို.မှေးခနဲ အိပျပြျောတာနဲ့ လနျ့လနျ့နတေယျ..အိပျပကျြညတှေ မြားပွီးသှေးပေါငျကြ ဆေးခနျးနဲ့မပွတျ…ဆေးထို့ရလှနျးလို့လဲ ညိုမဲစှဲနပွေီ .. ဒါနဲ့..တဈခြို့နားလညျသိတဲ့လူတှကေပွောလို့..လိပျပွာခြုပျလေး လုပျပေးပါဆို့လို့ ဆရာပွမှ..အောကျလမျးလုပျထားတယျတဲ့လေ…. ဪ…လူတှေ…လူတှေ…ကိုယျ့ပွုသညျ့ကံ… ပဲ့တငျသံ…ကိုယျ့ထံပွနျလာမညျ…. ဒါကို မသိလရေော့….မတ်ေတာသုတျလေးသာရှတျပွီး မတ်ေတာမပွတျ ပို့ပေးလြှကျပါဗြာ…” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါမှာ ရေးသားထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ကွာစိကတော့ အရမျးကိုခဈြခငျရတဲ့ ဇနီးခြောလေး အခုလိုနမေကောငျးဖွဈနတောကွောငျ့ တျောတျောလေးစိတျညဈနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ အောကျတိုဘာလ (၁၄) ရကျနကေ့ မင်ျဂလာဆောငျခဲ့တဲ့ ကွာစိတို့ဇနီးမောငျနှံနှဈဦးကတော့ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ အသကျကှာကွပမေယျ့ နားလညျမှု နဲ့ အိမျထောငျရေးကို တညျဆောကျထားကွတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ခဈြပရိသတျတှလေညျး ကွာစိတို့ဇနီးမောငျနှံနှဈဦး မကောငျးတဲ့အနှောငျ့အယှကျရနျတှမှေကငျးဝေးပွီး မကွာခငျမှာလူ့လောကထဲရောကျရှိလာတော့မယျ့ သမီးလေးနဲ့အတူ ပြျောရှငျအေးခမျြးတဲ့ဘဝလေးကို ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျကွပါဦးနျော။